Nahoana no nila taona 3 ireo manampahefana ao Pero mba hanadihadiana momba ny famonoana ity ramatoa ity? · Global Voices teny Malagasy
Tamim-pitandremana no nanafenan'ny polisy ny fanjavonana taona telo lasa izay
Voadika ny 24 Marsa 2020 12:53 GMT
Vakio amin'ny teny English, українська, Français, Nederlands, Italiano, Español
Solsiret Rodríguez Aybar. Pikantsary avy aminà lahatsary YouTube.
Taona telo sy tapany lasa izay i Solsiret Rodríguez Aybar, 23 taona, no nanjavona tao amin'ny toeram-ponenany tao El Callao, tanàna akaikin'i Lima renivohitr'i Pero niarahany nipetraka tamin'ny vadiny Brian Villanueva. Niteraka roa izy, ary nianatra ny sosiôlôjia tao amin'ny oniversite nasiônaly Federico Villarreal no sady mpikatroka tao anatin'ny hetsika “Ni una menos” (“Tsy hisy na vehivavy iray aza ho tavela”).
Tamin'izany fotoana izany,, na nameno tatitra milaza fanjavonana aza ireo ray aman-dreniny, tsy nanao fanadihadiana velively momba izay nanjo azy ireo manampahefana. Tena tsy noraharahian'ireo fampahalalambaovao ihany koa ilay izy.
Vao tamin'ny Febroary 2020, teo ambany fitarihan'ilay mpampanoa lalàna vaovao, vao nisy fisamborana voalohany natao mifandraika amin'ny raharaha Solsiret. Fotoana fohy taorian'izay, hitan'ireo manampahefana fa maty i Rodríguez ary nafenina tao ambanin'ny tranony taloha ihany ny taolambalony nandritra izay fotoana ela izay.
Nanomboka teo ireo fianakaviana akaiky an'i Villanueva dia nanaovana fanadihadiana momba ilay vono olona, taorian'ny taona maro tsy nanelingelenan'ny polisy azy ireo ho alaina am-bavany sy ho vavolombelona. Tsy nosavaina mihitsy ny tranon'izy ireo.
Hatreo dia nipoapoaky ny hatezerana ireo media sôsialy peroviàna. Nahoana no nila taona 3 mahery ireo Peroviàna manampahefana vao nanomboka nikatsaka ny rariny ho an'ny fianakavian'ity vehivavy tanora ity?
Ny 24 Aogositra 2016, nametraka taratasy tany amin'ny polisy i Brian Villanueva nitatitra hoe nandao ny tokantranony i Solsiret. Andro roa taty aoriana, nanandrana nametraka taratasy fanambaràna ny fanjavonan'ny zanany vavy ireo ray aman-drenin'i Solsiret, saingy tsy neken'ny polisy ilay izy noho ilay tatitra efa napetrak'i Villanueva tany aloha.
Nisy tantara vao haingana momba ilay raharaha nilaza hoe:
Nolavin'ny lehiben'ny polisy, Dante Pastor, ny fitarainan-dry zareo, tamin'ny filazàna fa, raha ny “traikefa betsaka ananany”, betsaka ny mety hisian'ny hoe nandao ny tokantranony i Solsiret, angamba nanaraka lehilahy hafa ary mety sipa “mazan-doha”
Farany, vitan'ireo ray aman-dreny ihany ny nametraka ny taratasiny tamin'ny 1 Septambra tamin'izay taona izay, saingy nampahafantarina azy ireo fa ny mpampanoa lalàna, Lucila Aliaga, niandraikitra ilay raharaha tamin'izany fotoana izany, tsy nandray fepetra mihitsy na kely aza hikarohana ilay vehivavy tanora io.
Tamin'ny 2018, noraisin'ny mpampanoa lalàna, María Quicaño, avy eo ny raharaha. Sady koa, araka ny tenin'ireo ray aman-drenin'i Solsiret Rodriguez Aybar, tsy nitondra fivoarana mihitsy ny fanadihadiana. Fa rehefa ny mpampanoa lalàna Jimmy Mansilla Castañeda no nandray an-tànana ilay raharaha tamin'ny Janoary 2019 vao nanomboka nitsimbadika ny zavatra rehetra.
Tena hita fa niankinan-javatra be ny fitadiavana ny toerana misy ny findain‘i Rodríguez: hitan'ireo mpanadihady fa nesorina tao anatin'ny findainy ny karatra SIM ary natsofoka tamina finday an'i Andrea Aguirre Concha, zaobavin'i Villanueva.
Ny 18 Febroary 2020, nosamborina i Aguirre sy ny vadiny Kevin Villanueva, kambana tsy misy hafa amin'i Brian, ary fotoana fohy taorian'izay dia fantatra fa nafenina any amin'ilay trano niarahany nipetraka tamin'i Brian ny taolambalon'i Solsiret Rodríguez.
Araka ny fijoroana vavolombelona avy amin'i Aguirre, maty teo am-pianjerana i Rodríguez rehefa nidona be ny lohany taorian'ny ady nifanaovan'izy roa vavy. Ireo valin'ny fitiliana anefa toa tsy mifanaraka tamin'io tantara io. Nolazain'ny Talen'ny polisim-pirenena peroviàna, José Luis Lavalle, tao anaty antsafa niarahana tamin'ny gazety fa:
Hitantsika eto fa niharan'ny herisetra ilay niharan-doza, ary io dia mahatonga anay hieritreritra fa nisy famonoana olona niharo habibiana, izany hoe vono olona, ary ny antony dia mifandray aminà disadisa teo anivon'io fianakaviana io.
Carlos Basombrío, izay minisitry ny atitany tamin'izany fotoana nanjavonan'i Rodríguez izany, ary nametraka fialàna noho ny antony tsy misy ifandraisany velively amin'ilay raharaha, dia nibitsika ny alahelony noho ny ninoany ny tatitra nataon'ny polisy nanamafy fa hoe nandao an-tsitrapo ny tokantranony, ny vadiny sy ireo zanany i Solsiret:
Raha mbola afaka nametraka fanindroany ny fialàko aho dia nataoko.
Raisiko ny andraikitra politika manontolo.
Hatezeran'ny media sôsialy
Mabel Huertas, mpanao gazety, no mamintina ny raharaha:
Roa ireo mpampanoa lalàna, samy vehivavy, no tsy nanohy ny fanadihadiana ny raharaha Solsiret, tsy tian-dry zareo mihitsy ny hanadihady momba ilay izy, tsy nohajainy ny tena fototrasan-dry zareo: miaro ny olompirenena ary manasazy ny heloka. Tamin'ny 2019, fanintelony tamin'ny mpampanoa lalàna no nanao ny asany ary farany dia efa an-dàlana ny hahitàna ny rariny. Henatra ho an'ireo mpampanoa lalàna eto Pero.
Carlos León Moya, mpikirakira vaovao eny amin'ireo famoahambaovao marobe, no nametraka fanontaniana vitsivitsy:
Momba ny raharaha Solsiret. Ny zaodahiny, Kevin Villanueva, no voalohany ahiahiana. Araka izany, nahoana ny trano iarahany mipetraka amin'ny sipany no tsy savaina? Oviana no nanaovan-dry zareo azy io, taona telo sy tapany taty aoriana ve? Etsy ankilan'izay, volana marobe ny biraon'ny fampanoavana no tsy namoaka tatitra. Tsy nisy niraharahian-dry zareo an'izany na kely aza.
Kathe Soto, naman'itompokovavy Rodríguez, nanoratra ny alahelo niainany nandritra izay telo taona sy tapany izay:
Taona telo, volana dimy ary andro 26 lasa izay, no naharaisako antso iray nanova ny fiainako.
Nolazaina tamiko fa tsy nody an-trano i Sol, iray amin'ireo namako akaiky indrindra, fa hoe tsy hita.
Nanao “fanadihadiana” ry zareo dia nanambara fa hoe nilefa izy.
Tsy nilefa velively i Sol, nataon-dry zareo izay tsy hahitàna azy.
Tranga iray amin'ireo anjatony maro
Tamin'ny 2019, nisy 168 ireo vehivavy niharan-doza vokatry ny herisetra mifototra amin'ny maha-lahy na vavy ao Pero, nefa sazy efatra fampidirana am-ponja no hany noraisina ho an'ireo famonoana vehivavy tao Pero. Tamin'ny Oktôbra 2019, sambany nanameloka lehilahy iray hifonja mandra-maty i Pero, noho izy namono vehivavy.
Saira Luján, mpikatroka avy amin'ny Paro Internacional de Mujeres, nilaza tamin'ny Salto Diario fa:
Tsy hoe ireo nanao herisetra taminy sy ny fiarahamonina manavakavaka monja ihany no atrehan'ireo vehivavy niharan'ny herisetra. Atrehan-dry zareo ihany koa ny rafi-pitsaràna izay tsy mahavita miantoka fiarovana azy araka ireo lalàna nasiônaly tsy sahaza, sy mbola misalasala ny amin'izy ireo ihany koa, vao mainka mandetika azy, ary mamoaka didy tsy voahevitra izay mazàna no manàfaka ireo nanao herisetra tamin-dry zareo.
Hatramin'ny 20 Febroary 2020, 25 ireo vehivavy maty nisy namono noho ny herisetra mifototra amin'ny mahalahy na vavy tao Pero.
Ny dimy amby valopolo isanjaton'ireny famonoana ireny dia mitranga mandritry ny “fisipàna, fiaraha-mipetraka, fifandraisan'ny mpifankatia, sipa fahiny na vady fahiny” hoy i , Eliana Revollar, mpitondra tenin'ny mpiaro ny zon'ny vehivavy ao amin'ny birao peroviàna mpanelanelana. Araka ny lazain'ilay psikôlôgy Martha Rondón hoe:
… ry zareo lehilahy mihevitra, na manao izay hinoan'ny hafa, fa ry zareo no lehiben'ny ankohonana, ary dia tsy maintsy “manafay” vehivavy iray raha toa ka tsy manaiky izy. Izany no antony mahatonga azy hanjakazaka amin'ny vehivavy, hifehy azy ary izany no antony, amin'ny tranga marobe, analàny ny ain'ny vavy.